May 14, 2022 - Achawlaymyar
အသက်၂၅နှစ်ပြည့်လို့မှရည်းစားမရသေးသည့် သူငယ်ချင်းတွေကို ၂၅နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မှာ seemore
May 14, 2022 by Achawlaymyar
မွေးနေ့ဆိုသည်မှာလူသားတိုင်း၏ဘဝမှာအပျော်ရွင်ရဆုံးအချိန်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိမိ၏လူ့ဘဝထဲရောက်လာခဲ့သည့်နေ့ထူးနေ့မြတ်လေးမှကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုလုပ်ရင်း မင်္ဂလာအချိန်လေးများဖန်တီးကာပြုမူတတ်ကြပါတယ်။ဥရောပတိုက်ဒိန်းမတ်နိုင်ငံမှာတော့ ၂၅နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မှာရည်းစားမရသေးပါက သူငယ်ချင်းများ၏အပြစ်ပေးခြင်းကိုခံရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အပြစ်ပေးသည့်ပုံစံကတော့ ကြိုးဖြင့်သေချာစွာချည်နှောင်ထားပြီး မြေမှုန့်များဖြင့်ပက်ဖြန်းကာ ပြုလုပ်တတ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ထိုသို့အပြစ်ပေးသည့်ဓလေ့ဟာလည်းပျော်ရွင်ဖွယ်ရိုးရားဓလေ့တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိမိတို့နိုင်ငံမှာတော့ ရည်းစားမရှိတဲ့လူကအကုန်နီးပါးအပြစ်ပေးခံနေရမှာသေချာပါတယ်။ Shoon (Cele Daily)
မဝေးတော့တဲ့ အနာဂတ်မှာ ဘာတွေဖြစ်ပေါ်လာဖို့ရှိနေလဲ….
မဝေးတော့တဲ့ အနာဂတ်မှာ ဘာတွေဖြစ်ပေါ်လာဖို့ရှိနေလဲ…. 1 သိပ်မကြာခင် သင့်ဘဝထဲကို အချစ်စစ်တစ်ခု ဝင်ရောက်လာဖို့ရှိနေတယ်။ လက်တွဲဖော်ရှိနေနှင့်ပြီးရင်တော့ ဂရုစိုက်မှုတွေ သိပ်ခံစားနေရပါလိမ့်မယ်။ တစ်ကိုယ်တည်းသမားဆိုလည် စိုးရိမ်စရာမရှိ… ဒီလို ဘဝကြီးမှာ ကြာကြာ မနေရတော့ပါဘူး။ အချစ်သစ်ကို ရှာဖွေတွေ့ရှိဖို့ ရှိနေတယ်။ အဓိကကတော့ လောကကြီးနဲ့ အနားက အရာတွေအပေါ် ပွင့်လင်း လက်ခံမှုရှိဖို့ပဲ ဖြစ်တယ်။2ဝမ်းနည်မှုတွေ၊ စိတ်ဓာတ်ကျမှုတွေ ဖြစ်ပေါ်လာမယ့် အလားလာရှိနေတယ်။ တစ်စုံတစ်ရာ အသစ် စတင်ဖို့ အခွင့်ရေးကြီးကြီးမားမား ရလိမ့်မယ်။ ရှိလို့ ရှိနေမှန်းတောင် မသိခဲ့တဲ့ အရာတွေကိုလည်း သင့်အနေနဲ့ ရှာဖွေတွေ့ရှိမယ်။ စမ်းသပ်မှုတွေကို မကြောက်ပါနဲ့… သင် အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်။3မမျှော်လင့်ထားတဲ့ ပုံစံနဲ့ သင့်ရဲ့ ပြဿနာတွေ၊ အဖြေမရသေးတဲ့ အမေးတွေဟာ … Read more
အနောကျတိုငျးသတို့သမီးဝတျစုံလေးတှနေဲ့ အလှဓာတျပုံလေးတှတေငျကာ ပရိတျသတျကို SUPRISE တိုကျလိုကျတဲ့ သရုပျဆောငျ ယှနျးယှနျး..
အနောက်တိုင်းသတို့သမီးဝတ်စုံလေးတွေနဲ့ အလှဓာတ်ပုံလေးတွေတင်ကာ ပရိတ်သတ်ကို Suprise တိုက်လိုက်တဲ့ သရုပ်ဆောင် ယွန်းယွန်း.. ချစ်ပရိတ်သတ်ကြီးရေပရိတ်သတ်တွေရဲ့အချစ်တွေကိုငယ်ငယ်လေးကတဲကနေသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့အကယ်ဒမီဆုရှင်သရုပ်ဆောင်ယွန်းယွန်းပဲဖစ်ပါတယ်နော်။ ရုပ်ရည်မှာလဲပြောစရာမရှိလှပလွနိးတဲ့ယွန်းယွန်းက တော့အနုပညာသရုပ်ဆောင်စွမ်းရည်မှာလဲအရမ်းတော်ပြီးပါရမီရှငိတစ်ယောက်လို့ဆိုရပါမယ်။ အပြစ်ပြောစရာမရှိအောင်ချစ်ဖို့ကောင်းပြီးပရိတ်သတ်တွေအချစ်ခံရတဲ့ယွန်းယွနိးကတော့ယနေ့လေးမှာတစ်ယောက်ထဲသတို့သမီးဝတ်စံုလေးတွေဝတ်ပြီးကျော့ရှင်းလှပနေတဲ့သူမရဲ့ပုံရိပ်လေးတွေကိုမြင်တွေ့ရပါတယ်။ယွန်းကိုချစ်တဲ့ပရိတ်သတ်ကြီးအတွ က်ယွန်းယွန်းရဲ့ပူံလေးတွေကိုမျှဝေပေးလိုက်ရပါတယ်။ Crd zawgyi ခ်စ္ပရိတ္သတ္ႀကီးေရပရိတ္သတ္ေတြရဲ႕အခ်စ္ေတြကိုငယ္ငယ္ေလးကတဲကေနသိမ္းပိုက္ႏိုင္ခဲ့တဲ့အကယ္ဒမီဆုရွင္သ႐ုပ္ေဆာင္ယြန္းယြန္းပဲဖစ္ပါတယ္ေနာ္။႐ုပ္ရည္မွာလဲေျပာစရာမရွိလွပလြနိးတဲ့ယြန္းယြန္းက ေတာ့အႏုပညာသ႐ုပ္ေဆာင္စြမ္းရည္မွာလဲအရမ္းေတာ္ၿပီးပါရမီရွငိတစ္ေယာက္လို႔ဆိုရပါမယ္။ အျပစ္ေျပာစရာမရွိေအာင္ခ်စ္ဖို႔ေကာင္းၿပီးပရိတ္သတ္ေတြအခ်စ္ခံရတဲ့ယြန္းယြနိးကေတာ့ယေန႔ေလးမွာတစ္ေယာက္ထဲသတို႔သမီးဝတ္စံုေလးေတြဝတ္ၿပီးေက်ာ့ရွင္းလွပေနတဲ့သူမရဲ႕ပုံရိပ္ေလးေတြကိုျမင္ေတြ႕ရပါတယ္။ယြန္းကိုခ်စ္တဲ့ပရိတ္သတ္ႀကီးအတြ က္ယြန္းယြန္းရဲ႕ပူံေလးေတြကိုမွ်ေဝေပးလိုက္ရပါတယ္။ Crd ခၥၸရိတ္သတ္ႀကီးေရပရိတ္သတ္ေၾတရဲ႕အခၥ္ေၾတကိုငယ္ငယ္ေလးကတဲေကနသိမ္းပိုကၷိုငၡဲ့တဲ့အကယၵမီဆု႐ျင္သ႐ုပ္ေဆာင္ၾယႏ္းၾယႏ္းပဲဖစၸါတယ္ေနာ္။႐ုပ္ရၫၼျာလဲေ္ပာစရာမ႐ျိၾလပၾလနိးတဲ့ၾယႏ္းၾယႏ္းက ေတာ့အႏုပညာသ႐ုပ္ေဆာ်ငၥမ္းရၫၼျာလဲအရမ္းေတာ္ၿပီးပါရမီ႐ၿငိတစ္ေယာကႅိဳ႕ဆိုရပါမယ္။ အ္ပစ္ေ္ပာစရာမ႐ျိေအာငၡၥၹိဳ႕ေကာင္းၿပီးပရိတ္သတ္ေၾတအခၥၡံရတဲ့ၾယႏ္းၾယနိးေကတာ့ေယန႔ေလးျမာတစ္ေယာကၳဲသတို႔သမီးဝတၥံုေလးေၾတဝတ္ၿပီးေက္ာ့႐ျင္းေၾလပနတဲ့သူမရဲ႕ပုံရိပ္ေလးေၾတကို္မင္ေၾတ႕ရပါတယ္။ၾယႏ္းကိုခၥၱဲ့ပရိတ္သတ္ႀကီးအၾတ က္ၾယႏ္းၾယႏ္းရဲ႕ပူံေလးေၾတကိုျမ္ေေဝပးလိုက္ရပါတယ္။ ခၥၸရိတ္သတ္ႀကီးေရပရိတ္သတ္ေၾတရဲ႕အခၥ္ေၾတကိုငယ္ငယ္ေလးကတဲေကနသိမ္းပိုကၷိုငၡဲ့တဲ့အကယၵမီဆု႐ျင္သ႐ုပ္ေဆာင္ၾယႏ္းၾယႏ္းပဲဖစၸါတယ္ေနာ္။႐ုပ္ရၫၼျာလဲေ္ပာစရာမ႐ျိၾလပၾလနိးတဲ့ၾယႏ္းၾယႏ္းက ေတာ့အႏုပညာသ႐ုပ္ေဆာ်ငၥမ္းရၫၼျာလဲအရမ္းေတာ္ၿပီးပါရမီ႐ၿငိတစ္ေယာကႅိဳ႕ဆိုရပါမယ္။ အ္ပစ္ေ္ပာစရာမ႐ျိေအာငၡၥၹိဳ႕ေကာင္းၿပီးပရိတ္သတ္ေၾတအခၥၡံရတဲ့ၾယႏ္းၾယနိးေကတာ့ေယန႔ေလးျမာတစ္ေယာကၳဲသတို႔သမီးဝတၥံုေလးေၾတဝတ္ၿပီးေက္ာ့႐ျင္းေၾလပနတဲ့သူမရဲ႕ပုံရိပ္ေလးေၾတကို္မင္ေၾတ႕ရပါတယ္။ၾယႏ္းကိုခၥၱဲ့ပရိတ္သတ္ႀကီးအၾတ က္ၾယႏ္းၾယႏ္းရဲ႕ပူံေလးေၾတကိုျမ္ေေဝပးလိုက္ရပါတယ္။ ခၥၸရိတ္သတ္ႀကီးေရပရိတ္သတ္ေၾတရဲ႕အခၥ္ေၾတကိုငယ္ငယ္ေလးကတဲေကနသိမ္းပိုကၷိုငၡဲ့တဲ့အကယၵမီဆု႐ျင္သ႐ုပ္ေဆာင္ၾယႏ္းၾယႏ္းပဲဖစၸါတယ္ေနာ္။႐ုပ္ရၫၼျာလဲေ္ပာစရာမ႐ျိၾလပၾလနိးတဲ့ၾယႏ္းၾယႏ္းက ေတာ့အႏုပညာသ႐ုပ္ေဆာ်ငၥမ္းရၫၼျာလဲအရမ္းေတာ္ၿပီးပါရမီ႐ၿငိတစ္ေယာကႅိဳ႕ဆိုရပါမယ္။ အ္ပစ္ေ္ပာစရာမ႐ျိေအာငၡၥၹိဳ႕ေကာင္းၿပီးပရိတ္သတ္ေၾတအခၥၡံရတဲ့ၾယႏ္းၾယနိးေကတာ့ေယန႔ေလးျမာတစ္ေယာကၳဲသတို႔သမီးဝတၥံုေလးေၾတဝတ္ၿပီးေက္ာ့႐ျင္းေၾလပနတဲ့သူမရဲ႕ပုံရိပ္ေလးေၾတကို္မင္ေၾတ႕ရပါတယ္။ၾယႏ္းကိုခၥၱဲ့ပရိတ္သတ္ႀကီးအၾတ က္ၾယႏ္းၾယႏ္းရဲ႕ပူံေလးေၾတကိုျမ္ေေဝပးလိုက္ရပါတယ္။
ဒီေန႔ ကဆုန္လျပည့္ေန႔မွာ စစ္ေကာင္စီ က ျပဳလုပ္တဲ့ သံဃာအပါးတစ္ေသာင္းေက်ာ္ ဆြမ္းေလာင္းပြဲမွာ လုံၿခဳံေရးတင္းၾကပ္ကာ လူထုမပါဝင္ဘဲ ဌာနဆိုင္ရာဝန္ထမ္းေတြနဲ႔ပဲက်င္းပသြားတယ္လို႔ မႏၲေလးၿမိဳ႕ခံေတြဆီကသိရပါတယ္။ ဆြမ္းေလာင္းပြဲအတြက္ ဌာနဆိုင္ရာေတြကို စစ္ေကာင္စီက ေခၚယူထားတာျဖစ္သလို စစ္အုပ္စုနဲ႔နီးစပ္တဲ့လုပ္ငန္းရွင္ေတြ ၊ အသင္းအဖြဲ႕ေတြပါဝင္ၾကပါတယ္။ ဆြမ္းေလာင္လႉပြဲမက်င္းပမီ ရက္ပိုင္းအလိုကတည္းက စစ္ေကာင္စီက ႀကီးမႉးတဲ့ ဆြမ္းဆန္ေလာင္းလႉပြဲကို သပိတ္ေမွာက္ၾကဖို႔ မႏၲေလးက သံဃသမဂၢ လူထုကို တိုက္တြန္းထားၾကပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးအၾကပ္တည္းထဲ က်ေရာက္ေနခ်ိန္မွာ ထြက္ေပါက္ရွာတဲ့အေနနဲ႔ စစ္ေကာင္စီဟာ ဘာသာေရးအခမ္းအနားေတြလုပ္ၿပီး သာသနာျပဳေနသေယာင္ ဘာသာေရးနဲ႔ May be an image of one or more people, people standing and outdoors ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ေတြကိုအသုံးခ်ေနတာလို႔ သံဃသမဂၢ (မႏၲေလး) ရဲ႕ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာပါရွိပါတယ္။ စစ္ေကာင္စီရဲ႕ဆြမ္းေလာင္းလႉပြဲ ၿမိဳ႕ခံလူထုမပါဝင္ ဆိုင္းမင္း/People’s … Read more
သနားစရာ ဖြစ်ရပ်မှန် ဇာတ်လမ်းလေးရှိနေတဲ့ မိသားစုမုန့်ပုံးရဲ့ ဓာတ်ပုံရာဇဝင်
သနားစရာ ျဖစ္ရပ္မွန္ ဇာတ္လမ္းေလး ရွိေနတဲ့ မိသားစု မုန္႔ပုံးရဲ႕ ဓာတ္ပုံရာဇဝင္ ပရိသတ္ႀကီးတို႔အားလုံးပဲ ငယ္ငယ္ကတည္းက နာမည္ႀကီး လူႀကိဳက္မ်ားခဲ့တဲ့ မိသားစု မုန္႔ပုံးေလးအေၾကာင္းကို သိၾကပါရဲ႕လား။ အဲ့ဒီမိသားစု မုန္႔ ပုံးမွာ လူတြမသိေသးတဲ့ စိတ္ဝင္စားစရာျဖစ္ရပ္ေလးရွိေနပါတယ္။ အဲဒီ ျဖစ္ရပ္ ကေလးကို အခု ပရိသတ္ႀကီးကို ေျပာျပေပးသြား ပါမယ္ေနာ္။ အဲဒီျဖစ္ရပ္ကေလးကေတာ့ ဒုတိယကမာၻစစ္ ႀကီးျဖစ္ၿပီး ၂ ႏွစ္အၾကာမွာ နာဇီ လူမ်ိဳးေတြကဂ်ဴး လူးမ်ိဳးေတြကို လူမ်ိဳးတုန္း သတ္ျဖတ္ျခင္း (Genocide) အစုလိုက္ အၿပဳံလိုက္ သတ္ျဖတ္မႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ အစုလိုက္ အၿပဳံလိုက္ သတ္ျဖတ္မႈထဲမွာ မိသားစု မုန္႔ပုံးထဲက ဂ်ဴးလူမ်ိဳး ကေလးေလးကလည္း တစ္ဦးအပါအဝင္ျဖစ္ပါတယ္။ ဂ်ဴးလူမ်ိဳး ကေလးေလးက မိသားစုနဲ႔ တစ္ကြဲတစ္ျပားျဖစ္ၿပီး ဂ်ာမနီ Cottbus … Read more
မင်းသမီး ဖွေးဖွေး ဟာ အရင်တုန်းက လွတ်လပ်တဲ့ဘဝကို ပြန်လည်လွမ်းမိတိုင်း ခံစားရတယ်လို့ ပြောပြလာ
ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် မင်းသမီးချောလေး ဖွေးဖွေး ဟာ ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့သရုပ်ဆောင် မင်းသမီးချောပါ။ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားပေါင်းများစွာကို ရိုက်ကူးထားပြီး ကျရာဇာတ်ရုပ်ကို သရုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ မြန်မာပြည်ရဲ့ ထိပ်တန်းမင်းသမီးတစ်လက်လဲ ဖြစ်ပါတယ်နော်။ မိုးကုတ်သူလေးဖြစ်တဲ့ ဖွေးဖွေး ဟာ ဇာတ်ကားတိုင်းမှာ ပါဝင်တဲ့ကာရိုက်တာတိုင်းကို အကောင်းမွန်ဆုံး သရုပ်ဖော်တင်ဆက်နိုင်တာကြောင့် အကယ်ဒမီဆုတွေကို ထိုက်ထိုက်တန်တန် ဆွတ်ခူးထားပါသေးတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခုလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အခြေအနေတွေမှာလဲ ပြည်သူတွေနဲ့တစ်သားတည်း ရပ်တည်ခဲ့တာကြောင့် ပရိသတ်တွေအချစ်ပိုကြရပြန်ပါတယ်။ မင်းသမီး ဖွေးဖွေး ဟာ ဆန္ဒပြပွဲတွေမှာ ပါဝင်ခဲ့တာကြောင့် င့် စစ်ကောင်စီဘက်ကနေ ပုဒ်မ ၅၀၅ ကကြောင့် အိမ်ကိုစွန့်ခွာကာ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်နဲ့ဝေးကွာနေတဲ့ ဖွေးဖွေးဟာ အရင်တုန်းကပျော်ခဲ့ဖူးတဲ့ အချိန်တွေကို ပြန်လည်လွမ်းမိနေတဲ့အကြောင်းကို ” Some days I wish I could go back … Read more
လျှပ်စစ်ရထားဆိုပြီး တဖွဖွပြောနေပေမယ့် ရန်ကုန်-နေပြည်တော်တောင် ရထားမထွက်နိုင်တဲ့အဖြစ်
လျှပ်စစ်ရထားဆိုပြီး တဖွဖွပြောနေပေမယ့် ရန်ကုန်-နေပြည်တော်တောင် ရထားမထွက်နိုင်တဲ့အဖြစ် ရန်ကုန်-နေပြည်တော် သီးသန့် အမြန်ရထားခရီးစဉ်နှင့် အခြားရထားခရီးစဉ်တချို့ လက်ရှိအချိန်အထိ ပြေးဆွဲနိုင်ခြင်း မရှိသေးကြောင်း မြန်မာ့မီးရထားမှ သိရပါတယ်။ “အခြားလမ်းပိုင်းရှိ ရထားများ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ဝမ်းနည်းစွာဖြင့် မထွက်နိုင် သေးပါ။ ကားခတွေ စျေး အဆမတန် မြင့်တက် နေတဲ့အချိန်ဖြစ်လို့ ခရီးသွား အခြေခံလူတန်းစား မိဘပြည်သူများ ခရီးစရိတ် သက်သာစေရန် အခြားလမ်းပိုင်းရှိ ရထားများ ဆက်လက်ထွက်နိုင်ရန်အတွက် မီးရထားဌာနမှ အစွမ်းကုန် ကြိုးပမ်းလျက်ရှိပါတယ်”လို့ မြန်မာ့မီးရထားက လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွင်ရေးသားထားပါတယ်။ ရန်ကုန်-နေပြည်တော် သီးသန့် အမြန်ရထားခရီးစဉ်မပြေးဆွဲနိုင်သေးသော်လည်း ရန်ကုန် – မန္တလေး ရထားစီးပြီး ရန်ကုန် မှ နေပြည်တော် နှင့် နေပြည်တော် မှ ရန်ကုန် ကို အမြန်ရထားဖြင့် သွားလာနိုင်ကြောင်း မြန်မာ့မီးရထား … Read more
ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ရာတွင် အောင်မြင်စေမယ့်နည်းလမ်း (၅)ခု
ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္ရာတြင္ ေအာင္ျမင္ေစမယ့္နည္းလမ္း (၅)ခု ကိုယ္ ပိုင္စီး ပြား ေရး တည္ေထာင္မယ့္သူတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ မိမိလုပ္ငန္းတိုးခ်ဲ႕ဖို႔ရန္အတြက္ အဆက္အသြယ္ေကာင္းမ်ား အမ်ားအျပားရွိဖို႔ လို အပ္ ပါတယ္။ မိမိရဲ႕Networking ပိုင္းကို ခ်ဲ႕ႏိုင္သမွ် မ်ားမ်ားခ်ဲ႕ေလ မိမိရဲ႕စီးပြားေရး ေအာင္ျမင္ေလပါပဲ။ ဒီေဆာင္းပါးေလးမွာေတာ့ ကိုယ္ ပိုင္စီးပြားေရးကို စတင္လုပ္ကိုင္မယ့္ သူမ်ားအတြက္ ဘယ္လို အခ်က္ေတြကို လိုက္နာသင့္သလဲဆိုတာကို ေဝမွ်ေပးခ်င္ပါတယ္။ ၁။ မိမိကိုယ္ကိုယ္ မိမိ ေသေသခ်ာခ်ာ သိနားလည္ေအာင္ ျပဳလုပ္ပါ သင့္ လက္ ထဲမွာ ေငြအရင္းအႏွီး ဘယ္ေလာက္ရွိသလဲ။ ေငြဘယ္ေလာက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမွာလဲ။ တစ္ေန႔လွ်င္ ဘယ္ႏွနာရီ အလုပ္ လုပ္ႏိုင္သလဲ။ သင့္ရဲ႕မိသားစုကေရာ သင့္အတြက္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့ ေပးႏိုင္ရဲ႕လား စတဲ့ ေမးခြန္းေတြ နဲ႔ … Read more
လိုင္စင္နံပါတ္ မမွတ္မိ‌ေတာ့တဲ့သူေတြ ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ အ‌ေပ်ာက္ေလွ်ာက္တဲ့အခါ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ?
လိုင်စင်နံပါတ် မမှတ်မိ‌တော့တဲ့သူတွေ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် အ‌ပျောက်လျှောက်တဲ့အခါ ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ပျောက်ဆုံးပြီးလိုင်စင်နံပါတ်မမှတ်မိ‌တော့တဲ့သူတွေယာဉ်မောင်းလိုင်စင်အ‌ပျောက်လျှောက်တဲ့အခါဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာကို နေမျိုးသူရ ခေါ် ဒုရဲအုပ်ဌေးလွင်မှပြောပြထားချက်အားပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်တွေ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့မယ်ဆိုရင်အသစ်ပြန်လျှောက်ရပါတော့မယ်။အဲ့ဒီလိုအသစ်ပြန်လျှောက်တဲ့အခါမှတ်ပုံတင်မူရင်း၊မိတ္ထူယာဉ်ထိန်းရဲတပ်ဖွဲ့ရုံးထောက်ခံစာပက်စ်ပို့ပုံ(၃)ပုံလို့လိုအပ်ပါတယ်။ မှတ်ပုံတင်တို့၊ပတ်စ်ပို့ပုံတို့ကမိမိမှာရှိပြီးသားမို့အခက်အခဲမရှိပါဘူး။ဒါပေမယ့်ယာဉ်ထိန်းရဲတပ်ဖွဲ့ရုံးထောက်ခံစာယူမယ်ဆိုရင်တော့အနည်းဆုံးယာဉ်ထိန်းရုံးကိုတော့သွားရပါတော့မယ်။ဒီအခါမှာမိဘပြည်သူများကိုနားလည်ထားစေချင်တာကယာဉ်ထိန်းရဲထောက်ခံစားဟာပျောက်ဆုံးသွားတဲ့မိမိလိုင်စင်နံပါတ်ကိုအမှုကင်းရှင်းကြောင်းစီစစ်ထောက်ခံပေးတာဖြစ်တာမို့မိမိရဲ့ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်နံပါတ်လေးသိထားဖို့လိုပါတယ်။ နံပါတ်ကလည်းမမှတ်မိဘူးယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ကိုမိတ္ထူကူးထားတာလည်းမရှိ၊ဓာတ်ပုံရိုက်ထားတာလည်းမရှိဘူးဆိုရင်ထောက်ခံပေးရမည့်ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်နံပါတ်မရှိတဲ့အတွက်ထောက်ခံစာရေးရာမှာအဆင်မပြေပါဘူး။ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်နံပါတ်ရရှိမှသာအဆင်ပြေမှာဆိုတော့နံပါတ်ကလည်းမမှတ်မိတာမို့ဘယ်လိုလုပ်ရမှန်းမသိတော့ဘူးဖြစ်ကြရတယ်။ ဒီတော့ မိမိရဲ့ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်နံပါတ်ကိုမှတ်ထားပါ မိတ္တူကူးထားပါ ဓါတ်ပုံရိုက်ထားပါ။ဘာမှမှတ်ထားတာမရှိလို့အခုလိုထောက်ခံစာယူတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်တော့နောက်ဆုံး ဒီလိုလေးလုပ်လို့ရပါတယ်။မိမိရဲ့မှတ်ပုံတင်နံပါတ်နဲ့ မိမိယာဉ်မောင်းလိုင်စင်လုပ်ခဲ့တဲ့ရုံးမှာလိုင်စင်နံပါတ်ရှာပေးဖို့အကူညီတောင်းလို့ရပါတယ်။ သက်ဆိုင်ရာရုံးကအကူအညီလည်းပေးပါတယ်။ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်နံပါတ်သာမှတ်မိထားရင်တော့အချိန်ကုန်သက်သာသွားတာပေါ့။ဒါကြောင့်မိမိရဲ့ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်နံပါတ်လေးတော့တစ်နည်းနည်းနဲ့မှတ်ထားဖို့ သတိပေးပါရ‌စေဗျာ။ Crd zawgyi လိုင္စင္နံပါတ္ မမွတ္မိ‌ေတာ့တဲ့သူေတြ ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ အ‌ေပ်ာက္ေလွ်ာက္တဲ့အခါ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ေပ်ာက္ဆုံးၿပီးလိုင္စင္နံပါတ္မမွတ္မိ‌ေတာ့တဲ့သူေတြယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္အ‌ေပ်ာက္ေလွ်ာက္တဲ့အခါဘယ္လိုလုပ္မလဲဆိုတာကို ေနမ်ိဳးသူရ ေခၚ ဒုရဲအုပ္ေဌးလြင္မွေျပာျပထားခ်က္အားျပန္လည္မွ်ေဝေပးလိုက္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ေတြ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ေပ်ာက္ဆုံးသြားခဲ့မယ္ဆိုရင္အသစ္ျပန္ေလွ်ာက္ရပါေတာ့မယ္။အဲ့ဒီလိုအသစ္ျပန္ေလွ်ာက္တဲ့အခါမွတ္ပုံတင္မူရင္း၊မိတၳဴယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႕႐ုံးေထာက္ခံစာပက္စ္ပို႔ပုံ(၃)ပုံလို႔လိုအပ္ပါတယ္။ မွတ္ပုံတင္တို႔၊ပတ္စ္ပို႔ပုံတို႔ကမိမိမွာရွိၿပီးသားမို႔အခက္အခဲမရွိပါဘူး။ဒါေပမယ့္ယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႕႐ုံးေထာက္ခံစာယူမယ္ဆိုရင္ေတာ့အနည္းဆုံးယာဥ္ထိန္း႐ုံးကိုေတာ့သြားရပါေတာ့မယ္။ဒီအခါမွာမိဘျပည္သူမ်ားကိုနားလည္ထားေစခ်င္တာကယာဥ္ထိန္းရဲေထာက္ခံစားဟာေပ်ာက္ဆုံးသြားတဲ့မိမိလိုင္စင္နံပါတ္ကိုအမႈကင္းရွင္းေၾကာင္းစီစစ္ေထာက္ခံေပးတာျဖစ္တာမို႔မိမိရဲ႕ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္နံပါတ္ေလးသိထားဖို႔လိုပါတယ္။ နံပါတ္ကလည္းမမွတ္မိဘူးယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ကိုမိတၳဴကူးထားတာလည္းမရွိ၊ဓာတ္ပုံ႐ိုက္ထားတာလည္းမရွိဘူးဆိုရင္ေထာက္ခံေပးရမည့္ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္နံပါတ္မရွိတဲ့အတြက္ေထာက္ခံစာေရးရာမွာအဆင္မေျပပါဘူး။ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္နံပါတ္ရရွိမွသာအဆင္ေျပမွာဆိုေတာ့နံပါတ္ကလည္းမမွတ္မိတာမို႔ဘယ္လိုလုပ္ရမွန္းမသိေတာ့ဘူးျဖစ္ၾကရတယ္။ ဒီေတာ့ မိမိရဲ႕ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္နံပါတ္ကိုမွတ္ထားပါ မိတၱဴကူးထားပါ ဓါတ္ပုံ႐ိုက္ထားပါ။ဘာမွမွတ္ထားတာမရွိလို႔အခုလိုေထာက္ခံစာယူတဲ့အခါမ်ိဳးမွာဆိုရင္ေတာ့ေနာက္ဆုံး ဒီလိုေလးလုပ္လို႔ရပါတယ္။မိမိရဲ႕မွတ္ပုံတင္နံပါတ္နဲ႔ မိမိယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္လုပ္ခဲ့တဲ့႐ုံးမွာလိုင္စင္နံပါတ္ရွာေပးဖို႔အကူညီေတာင္းလို႔ရပါတယ္။ သက္ဆိုင္ရာ႐ုံးကအကူအညီလည္းေပးပါတယ္။ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္နံပါတ္သာမွတ္မိထားရင္ေတာ့အခ်ိန္ကုန္သက္သာသြားတာေပါ့။ဒါေၾကာင့္မိမိရဲ႕ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္နံပါတ္ေလးေတာ့တစ္နည္းနည္းနဲ႔မွတ္ထားဖို႔ သတိေပးပါရ‌ေစဗ်ာ။ Crd
ယခုပတ် တနင်္ဂနွေ နေ့မှာ လအပြည့်ကြတ်မှုဖြစ်ပေါ်ချိန်သွေးရောင်လွှမ်းတဲ့ လ ကို ကမ္ဘာတစ်ဝန်း က မြင်တွေ့နိုင်
ယခုပတ် တနင်္ဂနွေ နေ့မှာ လအပြည့်ကြတ်မှုဖြစ်ပေါ်ချိန်သွေးရောင်လွှမ်းတဲ့ လ ကို ကမ္ဘာတစ်ဝန်း က မြင်တွေ့နိုင်မေလ ၁၃ ရက်နေ့။ ယခုလာမယ့် တနင်္ဂနွေ နေ့မှာ လဟာ ကမ္ဘာဂြိုလ်နဲ့ တစ်တန်းတည်းနေရာသို့ဝင်ရောက်လာကာ၊ လအပြည့်ကြတ်တာကို ကမ္ဘာတစ်ဝန်း ကမြင်တွေ့ရမှာ ဖြစ်ကြောင်း အမေရိကန် အာကာသအေဂျင်စီ နာဆာ ကပြောကြားပါသည်။ လဟာ ကမ္ဘာကြီးရဲ့ အရိပ်ထဲကို တနင်္ဂနွေ နေ့ ည ၉ နာရီခွဲပြီး နောက်ပိုင်း စတင် ဝင်ရောက်မှာ ဖြစ်ပြီး တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလကြတ်တာ ကို စတင်မြင်တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါသည်။ zawgyi, ယခုပတ္ တနဂၤေႏြ ေန႔မွာ လအျပည့္ၾကတ္မႈျဖစ္ေပၚခ်ိန္ေသြးေရာင္လႊမ္းတဲ့ လ ကို ကမာၻတစ္ဝန္း က ျမင္ေတြ႕ႏိုင္ေမလ ၁၃ ရက္ေန႔။ ယခုလာမယ့္ တနဂၤေႏြ … Read more